Sida loo soo dejiyo oo looga daawado offline-ka ah app-ka cusub ee Apple TV | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo soo dejiyo oo looga daawado offline-ka gudaha abka cusub ee Apple TV
Sida loo soo dejiyo oo looga daawado offline-ka gudaha abka cusub ee Apple TV
Waxaa laga yaabaa 16, 2019
App-ka cusub ee TV-ga Apple, oo meel walba laga heli karo iOS 12.3, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad iska diiwaan geliso TV-yada iyo kanaalada filimada, iyo sidoo kale kireysiga filimada iyo bandhigyada tooska ah ee Apple. Akhbaarta xun ayaa ah, haddii aad rabto inaad daawato fiidiyowyadaada oo keliya, appku wuu ka sii liitaa barnaamijkii hore ee Fiidiyowga. Laakiin haddii aad ku biirto kanaalada, ama aad jeclaan lahayd, markaa TV-gu waa hab cajiib ah oo lagu xoojiyo dhammaan madadaaladaas.
Oo bal qiyaas maxaa? Xitaa waa mid faa'iido leh markaad safraysid ama aad safraysid. Maanta waxaan arki doonaa sida loo soo dejiyo oo loo daawado bandhigyada TV-ga iyo filimada offline.
Kaxun App-kii hore ee Fiidiyowyada?
Marka hore, qaybta xun. Haddii aad isticmaasho TV-ga oo kaliya si aad u daawato bandhigyadaada, oo laga soo raray iTunes, markaa hadda waxaad haysataa dhammaan farsamooyinkan dheeraadka ah si aad wax uga qabato mar kasta oo aad bilowdo app. Laakiin intaas kuma koobna. Haddii aad ka heshay taageerada cutubka filimadaada, ka dibna adag. Taasi way tagtay. Hadda, u gal qaybta wanaagsan.
Sida loo soo dejiyo bandhigyada TV-ga iyo filimada ku jira app-ka TV-ga Apple
Tani way fududahay. Kaliya u gudub bandhiga aad rabto inaad daawato, midkood adoo raadinaya, ama baadhaya liisaska iyo ilaha kala duwan ee abka. Bandhigyada TV-ga, waxaad u baahan doontaa in lagugu diiwaangeliyo rukhsad si aad u daawato taxane, laakiin taas waxaad ka samayn kartaa abka dhexdiisa. Kaliya hoos ugu dhaadhac qaybta cinwaankeedu yahay Ku biir kanaalada Apple TV inaad iska diiwaan geliso gudaha abka TV-ga, adoo isticmaalaya rukunka App Store ee caadiga ah.
Xitaa waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho tijaabo bilaash ah si aad u tijaabiso adeega.
Taabo si aad u soo dejiso daawashada offline.
Kadib, marka aad hesho taxane ama filim aad rabto inaad daawato offline, kaliya taabo soo deji falaarta ku xiga qaybta. Waa kaas. Bandhigyadu hadda waa la soo dajin doonaa, oo diyaar u ah in la daawado hadhow.
Sida loo daawado bandhigyada TV-ga offline-ka ah iyo filimada gudaha abka TV-ga
Soodejisyadaadu waxay muujinayaan halkan
Si aad u daawato bandhigyadaada, taabo Maktabadda tab, ka dibna taabo La soo dejiyay gelida dhinaca bar-side. Tani waxay ku tusi doontaa dhammaan filimadaagii la soo dejiyey iyo bandhigyada TV-ga. Tani sidoo kale waa halka aad ka heli karto mid ka mid ah fiidiyowyada aad adigu ku dartay, maktabadaada iTunes.
Haddii aad rabto inaad kaydiso qaybahaaga si aad u daawato fasaxa, ama safarkaas "ganacsiga", markaa weli ha bilaabin daawashada iyaga! Markaad bilowdo daawashada bandhigga, tirinta ayaa bilaabanaysa. Sida aad arki karto, waxaan bilaabay daawashada qayb ka mid ah bandhig faneedka laga heli karo gobolkayga, waxaana hadda ii hadhay 47 saacadood oo keliya inaan daawado.
Sida iska cad xadkani ma khuseeyo fiidiyowyada aad adigu ku dartay. Laakiin haddii aad inta badan daawato fiidiyowyada laga soo dejiyo meelo kale, ama aad leedahay maktabad weyn oo warbaahin ah oo adiga kuu gaar ah, markaa waxaa jira xulashooyin ka wanaagsan. Waxaan jeclahay Infuse, tusaale ahaan.
Weli, way jirtaa, oo haddii aad horeba iska diiwaan geliso mid ka mid ah TV-ga ama kanaalada filimada, markaa wax dheeraad ah kuguma kacayso inaad isticmaasho abka Apple ee wanaagsan, nadiif ah, toosan.
Siideynta Alaabta Ecommerce: Meey 16, 2019
15 Foomamka Cufis-jiidadka ugu Fiican Addons & Extensions